Filazana media sosialy | Fifamoivoizana hiara-miasa
09/24/2021 09:40 hariva GMT
Ity manaraka ity dia mamaritra ny Social Media Fampahafantarana momba ny bilaogiko fifamoivoizako tranonkala.
Olana amin'ny haino aman-jery sosialy
Miaina amin'ny fotoana mahaliana isika rehefa ny zon'ny tsiambaratelo dia tompondaka miaraka amin'ny fahavononan'ny olona an-tsitrapo an-tsitrapo ny hizara ny antsipirian'ny fiainany akaiky indrindra sy be loatra amin'izao tontolo izao, eny fa na dia amin'ireo toerana toa ny tranokalan'ny My Traffic Blog aza. Na dia miharihary aza ny endrik'izy ireo, dia manomboka mipoitra ny loza ateraky ny famoahana ampahibemaso ny vaovao marim-pototra.
Ireo mpilalao media sosialy manan-danja dia enjehina noho ny fampiasana tsy ara-dalàna na fanararaotana / fampiasana diso ny mombamomba anao. Ny tsy fiarovana sy fampitandremana dia mety ho fitrangan-javatra ifantohana. Napetraka ny fitoriana mangataka onitra noho ny fanambarana voamarina fa tompon'andraikitra amin'ny fahafatesan'ny olona na famonoan-tena. Ireo bilaogera mihevi-tena hiasa amin'ny alàlan'ny fahalalahana miteny tsy voafetra na ny latitude lehibe kokoa atolotra ny mpikambana amin'ny gazety dia very raharaha sivily noho ny fanalam-baraka, fanendrikendrehana, fanalam-baraka, sns.
Rehefa mandroso haingana ny haino aman-jery sosialy hamela ny fanaparitahana teknolojia be pitsiny sy mora kokoa, dia mirongatra ny tsy fahombiazan'ny fanambarana tsy misy fetra. Noho izany, ny fomba mahonena amin'ny tombotsoan'ny media sosialy, na dia manadino ireo loza ateraky ny fanambarana tsy misy fotony aza, dia afaka manamora ny traikefa an-tserasera mahafinaritra, tsy misy ny vokadratsin'ny fihoaram-pefy, amin'ny sehatra toa ny tranonkalako My Traffic Blog.
Fahatongavana / sehatra misy ny haino aman-jery sosialy
Tokony hieritreritra ianao fa ampiasaina amin'ny tranokala My Traffic Blog ny media sosialy. Tsindrio tsotra amin'ny bokotra iray hanohanana olona, ​​vokatra na serivisy dia manangana mombamomba anao, izay tokony hoheverinao fa mety ho hitan'ny hafa. Ny fiezahana hizara tranokala amin'ny olona iray, na amin'ny alàlan'ny fanindriana bokotra mivantana na amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka manamora ny tranokala, dia tokony hieritreritra ianao fa mety tsy hijanona amin'ny mpandray azy io, ary izany dia mety hiteraka fampahalalana momba anao izay mety ho hita olona marobe tsy misy fetra. Ny vokatr'izany domino izany dia mety hanomboka eto amin'ny tranokalan My Traffic Blog.
Zavatra tsotra toy ny bilaogy fanehoan-kevitra manome ny fotoana hanaovana fanehoan-kevitra amin'ny lohalika izay mety ho fantatry ny besinimaro ary mety tsy haneho tena toerana (farafaharatsiny amin'ny tanjaka na hamafisana) azonao atao aorian'ny fe-potoana fandinihana lalina kokoa. Tokony homarihinao ihany koa fa ny fahatsorana fidirana amin'ny tranokala iray amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana hidirana amin'ny tranokala hafa, na ny fampiasana fidirana manerantany hidirana amin'ny tranokala marobe dia afaka manangona dosie aminao sy ny fitondrantenanao amin'ny Internet izay mety hampahafantatra bebe kokoa amin'ny antoko tsy noeritreretina noho ianao mety hahatsapa na maniry. Mety misy na iray amin'ireo endri-javatra ireo ao amin'ny tranokalan'ny My Traffic Blog amin'ny fotoana iray na amin'ny fotoana hafa.
Ireto ohatra vitsivitsy ireto dia maneho ny fomba mety misy sasany amin'ny media sosialy, na dia tsy lisitra feno ary ireo teknolojia vaovao dia hamadika haingana ity lisitra ity. Ny tanjona dia ny hahatsapana ny fahatongavan'ny media sosialy, ny fisiany betsaka amin'ny tranokala amin'ny endrika isan-karazany (ao anatin'ity tranokala ity), ary hananana fomba fiasa tompon'andraikitra amin'ny fampiasana azy.
Fiarovana ny hafa
Tokony ho fantatrao fa ny divulgences vita sy amin'ny sehatra media sosialy amin'ity tranokala ity sy ny hafa dia tsy tery aminao irery. Ny famoahana dia matetika atao momba ny antokon'olona izay misy fiatraikany amin'ny hafa. Ny famoahana hafa dia mazava momba ny antoko fahatelo, indraindray tsy manam-pahendrena. Izay mety hiseho mahatsikaiky ao anatin'ny indray mipi-maso dia mety ho mampalahelo amin'ny manaraka. Ary ny valifaty "ampahibemaso" miafina dia mety hisy vokany mandritra ny androm-piainany.
Ny fampiasana tsara ny haino aman-jery sosialy amin'ny tranokalanay dia hampihena ny fampahalalana anao indrindra amin'ny raharaha momba anao, fa tsy ny hafa. Raha misy fisalasalana, dia tsara kokoa ny miala amin'ny tsy famoahana. Mampisalasala ny fampahalalana tena misy dikany loatra ka tsy azo ampidirina amin'ny fitandremana ny fihetsika mba hiarovana ny tombontsoan'ny olona iray izay miharihary tsy fidiny amin'ny fanapahan-kevitrao hampahafantatra zavatra ao amin'ny tranokalan'ny My Traffic Blog (na hafa).
Tokony hiato kely ihany koa ianao handinika ny vokany maharitra amin'ny fanapahan-kevitra segondra hizara ampahibemaso ny mombamomba anao manokana ao amin'ny tranonkalako My Traffic Blog. Ny hevitra, ny tiana, ny tsy tianao, ny safidiny ary raha tsy izany dia afaka miova. Ny famoahana fomba fijery mibaribary izay hazoninao anio dia mety mifanipaka amin'ny fomba fijerinao amin'ny ho avy. Na izany aza, ny "vaovao" dia hijoro mifanaraka hatrany amin'ny fanambarana teo aloha nataonao izay namboarina ho anisan'ny mombamomba anao. Na dia mety tsy dia misy akony maharitra aza ny atin'ny sakafonao maraina, ny angona hafa zaraina mora foana koa dia mety hisy vokany izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahafahanao mahazo asa sasany na manakana ny fiainana sy ny hetahetan'ny fiainana hafa.
Toy ny fizarana fampahalalana momba ny olon-kafa, dia tokony hitandrina tsara alohan'ny hamoahana vaovao momba anao. Raha misy fisalasalana dia tsara kokoa ny tsy manao azy. Ny tombony azo amin'ny fotoana fohy, raha misy, dia azo oharina amin'ny vokany avy eo. Ary farany, tokony homarihinao fa tsy tompon'andraikitra amin'ny fanesorana atiny izahay rehefa nizara, ary mety tsy ho vitanay izany.
Fepetra amin'ny fampiasana angona media sosialy
Ianao, amin'ny maha-mpitsidika ny tranokalan'ny My Traffic Blog anao, dia tsy mahazo manao haino aman-jery sosialy "mine" na sehatra hafa misy ato raha te hahazo vaovao manokana mifandraika amin'ny hafa. Na dia teo aza ny olona naneho ampahibemaso ny angona dia tsy tokony hieritreritra ianao hoe toa manana fahalalahana hisambotra, hamerina na hampiasa indray izany vaovao izany ianao. Izay fampiasana haino aman-jery sosialy na sehatra mifandraika amin'ny tranokalanay dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny fifandraisana ifandraisany ihany, mandritra ny fitsidihan'ny tranonkala ihany.
Mifanaraka amin'ny angon-drakitra media sosialy
Satria ny sehatra media sosialy dia miorina amin'ny atiny ateraky ny mpampiasa dia tokony hoheverinao io zava-misy io amin'ny fikatsahana ny maha-marina ny zavatra rehetra vakianao. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fanamarinana izay atiny novokarin'ny mpampiasa izahay raha ny marina. Ny politika fanao tsara indrindra dia ny fiheverana ny atiny rehetra ho toy ny hevitra hentitra fa tsy zava-misy.
Olana mety hitranga
Tokony ho tadidinao ihany koa fa ny teninao dia mety hitarika andraikitra amin'ny fahavoazana mahazo ny hafa. Na dia manan-jo hiteny malalaka aza ianao dia tsy manan-jo hanimba olon-kafa. Eo ambanin'ny fitsipiky ny lalàna fampijaliana, tompon'andraikitra foana ianao amin'ny toe-javatra misy anao:
1. notakiana ianao mba hanao zavatra, fa tsy nanao (izany hoe: "adidy hikarakara")
2. ny anao dia tsy maintsy mijanona tsy hanao fihetsika nefa tsy nanao (izany hoe: fanendrikendrehana, fanalam-baraka, sns.)
Ireo "fahotana fanesorana sy fanirahana" ireo dia mety hiteraka olana aminao, na inona na inona filazanao fa manao bizina amin'ny endrika orinasa iray na maromaro ianao. Ny fitondran-tena tsy ara-dalàna sy tsy misy fotony, raha atao amin'ny anaran'ny orinasa na orinasa, dia mbola fitondran-tena tsy ara-dalàna sy tsy manaraka fomba. Satria zara raha tafiditra ao anatin'ny drafitra fandraharahana hanao fitondran-tena tsy ara-dalàna sy tsy etika, dia miahiahy ianao fa miasa amin'ny andraikitra ofisialy, fa angamba, manararaotra an'io fahaiza-manao io hanatanterahana ny fanaovan-dratsy ataon'ny tena manokana. Tokony hanontany mpisolovava manana fahazoan-dàlana ianao raha maniry torohevitra ara-dalàna momba ny (mety) fanamafisana ny toe-javatra misy anao na olana ara-dalàna naterak'ity tranonkala ity na hafa.